WAR DEG DEG:- Ciidamda Dowlada oo Shacab ka soo Furtay Al shabaab – XAMAR POST
WAR DEG DEG:- Ciidamda Dowlada oo Shacab ka soo Furtay Al shabaab
By Mohamed Ahmed On Oct 4, 2017
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka degaanka Goof-gaduud Buuray ee gobolka Baay ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan ku qaadeen tuulooyin badan oo hoostaga degaankaasi.
Howlagalka oo ay fulinayeen Ururka 46-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo maamulka deegaanka Goof-gaduud Buuraay ayaa lagu qaaday deegaan War-gaduud Shanta oo 35-km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, halkaasi oo ay ku sugnaayeen Maleeshiyaadka Al-shabaab
Siidow Cali Guddoomiyaha deegaanka Goof-gaduud Buuray ayaa sheegay in ciidanku ay la wareegeen deegaanka, islamarkaana dib ay usoo celiyeen xoriyadda dad shacab ah oo Al-shabaab ay u heysteen in si qasab ah ay uga qaataan lacago baad ah.
“Waxaan Al-shabaab kala wareegnay deegaanka ay ku dhuumaaleysanayeen oo dad shacab ah ku dhibaateynayeen, qaar kamid ah dadka wan kasoo sii deynay, qaar kalena duurka ayey la galeen walina wan ku daba jirnaa”ayuu yiri guddoomiyaha.
Gudoomiye Siidow Cali ayaa intaasu ku daray in ay sii wadi doonaan howlgalada ka dhan ka ah Al-shabaab ee ka socda deegaanada gobolka Baay.
WARBIXIN: Maxaan fal argagixiso loogu tilmaamin toogashadii Las Vegas?
FAALLO:Saldhig Milatari oo Mustaqbalka loo aayi-doono!!!